Kaabsalkii Madhanaa ee HPMC, Kaabsalkii Khudaarta, Kaabsalkii Bannaan ee Veggie - Bariga
Heerka Buuxinta Sare ee Iibinta Khudaarta Cuntada Dheeraadka ah 0 Khudaarta Madhan Hpmc Kaabsal
Muuji Kaabsoosha Khudaarta ee Madhan ee Hufan ee Hufan 00 0 1 2
Baakado Eco-Freindly Baakadeysan oo Daboolsan Heat Sealing Cover Cover Logo Aluminium-bireed Foornada Madhan ee Koobabka Nespresso Capsule
Cabbirka Iibinta kulul 00 Kaabsal Madhan oo Khudaar Hufan leh oo leh Qalabka HPMC
Yantai Oriental Pharmacap Co., Ltd. waa shirkad farsamo sare leh oo casri ah oo ku hawlan R&D, wax soo saarka iyo iibinta kaabsoolka dhirta. Iyada oo leh aag dhan 60,000 mitir murabac, shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista kaabsoosha dhirta HPMC oo leh HPMC iyo algae badda sida alaabta ceeriin ee ugu weyn.
Shirkadu waxay soo bandhigtaa hibooyin tiro badan, waxay baaraan mashaariicda waxayna mas'uul ka yihiin macaamiisha
ADEEGGA SOO SAARKA
Waxaan u fidinnaa adeegyo dhammaan dhinacyada macaamiisha u baahan kaabsalkeenna. Waxaan siinnaa kaabsoosha midabyo iyo cabbirro kala duwan leh, iyo sidoo kale mashiinka buuxinta.
Farqiga iyo faa'iidooyinka kaabsoosha khudradda iyo kaabsoosha gelatin
Kaabsoosha adag waxaa loo qaybiyaa kaabsoosha gelatin iyo kaabsoosha qudaarta sida ay u kala duwan yihiin ...
Midabada dabiiciga ah ayaa noqota cho ...
Midabka cuntada waa wakiilka midabaynta ee cuntada lagu daro. Waxaa jira fikrado kala duwan warshadaha oo ku saabsan isbarbardhigga u dhexeeya midabka dabiiciga ah iyo midabka dardaro. Kuwa soo socda ayaa ah isbarbardhigga faa'iidooyinka iyo di ...
Isbarbar dhigga dalabka ee kaabsalka dhirta ...
1. Hydroxypropyl methylcellulose waxaa loo adeegsadaa ka -faa'iideyste dawadeed, waxaana si weyn loogu isticmaalaa xirmooyinka kiniinka iyo wakiilka dahaarka unugyada. Waxaa lagu qaataa dawooyin badan waana badbaado oo la isku haleyn karo. 2. Hydroxypropyl methylcellulose waa che ...